Yimalini onokuyenza ngeGoogle AdSense? - Learn Expert Blogging
Yimalini onokuyenza ngeGoogle AdSense?
Unokufumana nantoni na ngokulula 50 Iidola ukuya 1000+ Idola ngosuku kwiGoogle AdSense. Ukufezekisa le njongo okanye nangaphezulu, Kuya kufuneka ufumane ukugcwala okusemgangathweni ngokusetyenziswa kwesicwangciso esifanelekileyo.
Njengoko iGoogle AdSense iyimveliso kaGoogle. Izigidi ezininzi zeerandi ziqhuba iintengiso kwi-intanethi nge-google. Bahlawula uGoogle ngeentengiso ukuze bazise inkonzo eluntwini.
UGoogle uvumela abapapashi ukuba babonise iintengiso kwiwebhusayithi yabo kwaye ngokubuyisela uGoogle kunye nomnini wewebhusayithi bafumana imali xa umntu ecofa kwintengiso.
Kukho izigidi zewebhusayithi kwi-intanethi. Ngaphandle kwabo, uninzi luneendwendwe ezilungileyo zemihla ngemihla.
Apha uGoogle usebenza njengophakathi. Ukuba uneqonga elizimeleyo njenge-WordPress, i 30% Icandelo lemali engenayo liya kuGoogle, kunye nabanye 70% yeyakho.
Kwelinye icala, ukuba usebenzisa ibhloko yokubloga kaGoogle blogger.com, Kule meko uGoogle ugcina 40%.
Akukho mthetho unzima kwaye ukhawulezayo wokuba emva kokutyelela kangaphi kwiwebhusayithi yakho, yimalini onokuyifumana ngeAdSense? Kuxhomekeke ngokupheleleyo kwimeko yokuba luhlobo luni lwesihloko obhala kuso.
Ukwenza icace ngakumbi, ngokubanzi, imiqathango enxulumene nesayensi yezonyango inexabiso eliphezulu ngokucofa nganye. Iqala nge 1 ukuya 2 Iidola kwaye ngokulula iya 50 Iidola ngokunqakraza. Oku kuthetha ukuba ezinye iindwendwe ziyandwendwela iwebhusayithi yakho, funda inqaku lakho kwaye ucofe kwintengiso ukufumana le nkonzo, uya kuba nayo 70% CPC iyonke, nabaseleyo 30% isepokothweni kaGoogle.
Umzekelo, Ubonile abantu abaninzi bekhangela kwi-intanethi “Unyango lokutshintsha iinwele”. Ukuba ubhala inqaku malunga nesi sihloko sithile. Uya kuyifumana i-CPC ngokulula 7 ukuya 10 Iidola ngokunqakraza. Ukuba ufumana inani elifanelekileyo lokucofa kubakhenkethi, unokwenza ngokulula ujikeleze $50 ngosuku.
Kwelinye icala, ukwabelana ngamava am, xa ndiqala uhambo lwam lokuqala ndingenalo ulwazi, Ndiyakhumbula ukuba yayiyeyona ntlekele inkulu. The reason because I wrote articles on the topic with no CPC. Abarhwebi bebengahlawuli ngegama eliphambili endilibhalileyo lokujolisa kubaphulaphuli. Kwakungenxa yemibongo yendawo. Ngokuqinisekileyo uyahleka ngalo mzuzu. Ngokusisiseko ndinolwazi olufanelekileyo ngayo kodwa kwakungekho sibonelelo ukuba awuyiguquli le nto ibe yimali elungileyo.
Ndabhala phantse 50 kunye namanqaku kamva afumanisa ukuba andenzi ngeniso engaphezulu kwe- 5 Iidola ngenyanga. Ukuphoxeka kwakuyinyani. Kungenxa yokuba bendingayazi inyani yokuba kufuneka ukhathalele ukuba lingakanani igama elingundoqo elihlawula kuwe. Ukuba ayisiyonto, ke kuya kufuneka ulishiye elo gama liphambili kuba alizisi mali elungileyo kwiGoogle AdSense.
Ndicebisa ngokwamava am, Kuya kufuneka ujonge igama eliphambili le-CPC ngaphambi kokubhala inqaku. Yiya kuphando lwamagama aphambili kuya kufuneka ube nolwazi oluninzi oza kubhala 100 + ngokuthe chu. ukuba uqala isihloko kodwa ungenalo ulwazi oluninzi oko kuthetha ukuba uphela kungekudala.
Kufuneka ufunde: Uyakha njani iwebhusayithi yeWebhusayithi enokuthi ifumane imali elungileyo
Iwebhusayithi okanye ababhali bebhlog abakhathali ngesantya sewebhusayithi. Yimpazamo yabo. Kuya kufuneka bayazi inyani yokuba isantya sewebhusayithi sibaluleke kakhulu ngelixa sifumana imali kwiGoogle AdSense.
I-Google AdSense ikunceda ukuba ufumane imali ngokubonisa ubungakanani obahlukileyo bezibhengezo kwiwebhusayithi yakho. Luhlobo lwekhowudi esemva kwewebhusayithi xa umntu othile etyelele iwebhusayithi yakho. Ikhowudi yeskripthi isebenza ngalo lonke ixesha kwaye inciphisa ixesha lokuvula iwebhusayithi.
Ngokubanzi, ixesha kufuneka libe ngaphakathi 2 ukuya 3 imizuzwana kodwa xa ufaka ikhowudi yeskripthi, kwenzeka ntoni kuqala ukuthatha 10 ukuya 15 imizuzwana ukuvula iwebhusayithi. Ngalo mzuzu, umsebenzisi akafuni kuhlala ixesha elide. Bacofa iqhosha langasemva, Buyela Umva, kwaye uye kwenye iwebhusayithi.
Emva koko, Uyenza njani imali? ukuba iindwendwe azindwendweli iwebhusayithi yakho. Ababoni nto ngaphakathi kwexesha elisondeleyo. Ngokuqinisekileyo ilahleko yengeniso ngeGoogle AdSense.
Yale, ufuna ukusingathwa okukhawulezayo, eneempendulo ezilungileyo zeseva. Kule mihla IBluehost ibonelela ngenkonzo ebalaseleyo. Ayisiyiyo le kuphela kodwa, Banikezela ngeempawu ezongezelelweyo njenge Isatifikethi se-SSL nangaphezulu abadlala indima ebalulekileyo kuGoogle kuluhlu namhlanje nakwixesha elizayo.
Previous PostNgaba Kunzima Ukwenza Imali Ngokudityaniswa Kwentengiso?
Next PostNgaba ungathengisa ngokudibeneyo kunye neAdSense?